NA Orinasa Factory | China na mpanamboatra vokatra
Jiro fandidiana LED SMart-L40plus
Miaraka amin'ny famolavolana modular ho an'ny solomaso, SMart-L dia manana effets tsy misy aloka tonga lafatra ary mahafeno ny ankamaroan'ny filan'ny fandidiana. Ny vatana mazava rehetra dia maivana ary miorina tsara.
Jiro fandidiana LED SMart-L35plus
Jiro fandidiana LED SL-P40
Amin'ny alàlan'ny famolavolana pedal voninkazo, SL-P40, SL-P30 taratra fandidiana tarihina dia afaka mamaly ny ankamaroan'ny filàn'ny fandidiana noho ny endriny maharitra sy marani-tsaina.
Jiro fandidiana LED SL-P30
Tabila fiasa elektrika-Hydraulika XHT-D
Ny latabatra fandidiana feno, miaraka amin'ny kapila fanerena herinaratra, dia afaka manome fahafaham-po ny andrim-pitsaboana momba ny vidin'ny vidin-javatra, ny tabataba ambany, ny fandidiana miadana sy maharitra, ny fahamendrehana sy ny filaminana.
Tabila fiasa elektrika XHT-B
Latabatra fiasan'ny elektrika-Hydraulika STable-H7000
Miaraka amin'ny famolavolana faritra dimy mahazatra, ny STable-H7000 dia afaka mamaly ny ankamaroan'ny filan'ny fandidiana. Izy io dia vokatra avo lenta avo lenta amin'ny tsenan'ny latabatra fandidiana.
Tetezana mihantona-U ICU Hanging Medical
Ny SEcure Medical Hanging Bridge dia manome sehatra azo antoka sy avo lenta ho an'ny ICU, CCU, PICU, NICU ary toy izany koa ny SEcure-U no maodely namboarina tamin'ny faritra maina sy lena nisaraka.
Tady fandidiana SEcure-SJW
Ny pendant medikaly dia matetika ampiasaina amin'ny efitrano fandidiana, ICU ary efitrano fandefasana. Manome sehatra fampidinana, loharano iainana ary famatsiana herinaratra ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana mifandraika amin'izany. Ny pendant SHINVA SEcure-SJW mekanika misy pendant Single na Dual-arm dia manome tontolo azo antoka sy avo lenta ary madio ho an'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy.
Tetezana mihantona-H ICU mihantona fitsaboana
Ny SEcure Medical Hanging Bridge dia manome sehatra azo antoka sy avo lenta ho an'ny ICU, CCU, PICU, NICU ary toy izany koa ny SEcure-H no maodely namboarina niaraka tamin'ny faritra maina sy lena.